Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ku wajahan Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ku wajahan Dhuusamareeb
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi ayaa Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ku wargaliyay in birri isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay kusoo wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa waraaq uu u diray madaxweynaha Galmudug ku sheegay in maadaama arimaha looga hadlayo shirka Dhuusamareeb ay ka mid tahay xaaladda xildhibaanada kasoo jeeda Gobalda Waqooyi uu go’aansaday inuu goob jog ahaado.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa ah qofka ugu sarreeya shaqsiyaadka xilalka haaya ee kasoo jeeda Soomaaliland, hayeeshee Fahad iyo Farmaajo ayaa masuuliyaddiisi duudsiiyay waxa ayna dusha u saaree Mahdi Guuleed oo ah Ra’iisul wasaare ku xigeynka dalka.
Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa waraaqda uu u diray Qoorqoor ku yiri, “Maadaama arinta doorashada xildhibaanada kasoo jeeda Gobalda Waqooyi Soomaaliland ay ka mid tahay arimaha qilaafku ka taagan yahay ee laga wada hadlayo, waxaan kula socod siinayaa in ay inoo qorsheysan tahay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo in aanu nimaadno magaalada Dhuusamareeb maalinta birri ah, si aan shirka uga qeyb galno”.
Farmaajo iyo Cabdi Xaashi ayaa ahaa saaxiibo isku dhow Saddexdii sano ee ugu horreysa Dowladdan hayeeshee waxa kala jiiteen sanadkii u danbeeyay markii la isku fahmi waayay maareynta arimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan soo xulidda xildhibaanada ka yimaada Gobalada Waqooyi.